३५ केजी ट्युमर निकालियो- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
३५ केजी ट्युमर निकालियो
भक्तपुर — भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ३२ वर्षीया एक महिलाको पेटबाट ३५ केजी ट्युमर निकालिएको छ ।
काठमाडौंको स्वयम्भू निवासी ती महिलाको डा. सृष्टि श्रेष्ठ प्रजापति नेतृत्वको टोलीले आइतबार सफल शल्यक्रिया गरेको हो ।
एक वर्षअघि नै पेट फुल्ने समस्या भएर ती महिला अस्पताल पुगेकी थिइन् । त्यसबेला चिकित्सकले पेटमा सिस्ट भएको भनेका थिए । हाल पेट बढ्दै निकै ठूलो भएर असहज भएपछि उनी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल आइपुगेकी थिइन् । आर्थिक अभावका कारण समयमा नै उपचार पाउन नसकेकी उनलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले सेवा दिएको हो ।
डा. प्रजापति नेतृत्वको शल्यक्रिया टोलीमा डा. उषा बाडे श्रेष्ठ, डा. अनिशा श्रेष्ठ, डा. रञ्जना मण्डल र डा. देवकी गुवाजुको संलग्नता रहेको अस्पतालले जनाएको छ । ती महिलाको स्वास्थ्य अवस्था हाल सामान्य छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ ०८:२६
खोलामा अनियन्त्रित दोहन
रूपन्देही — खोला र नदीहरूमा मापदण्डविपरीत डोजरसहितका ठूला मेसिन प्रयोग गरेर अवैध उत्खनन भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश ठूला खोला र नदीमा पछिल्लो एक सातादेखि डोजर, एक्स्काभेटर, टिपर र ट्र्याक्टरको ताँती छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ ०८:२३